Waa maxay isha ay leedahay 3 Qalabka lagu aqoonsado noocyada xarfaha internetka | Abuurista khadka tooska ah
Waa maxay isha ay leedahay 3 Qalabka lagu aqoonsado noocyada xarfaha khadka tooska ah
Encarni Arcoya | 30/06/2021 10:10 | La cusbooneysiiyay 30/06/2021 10:23 | Tricks
Waxaa hubaal ah in kabadan hal jeer oo aad ka daalacaneysay internetka oo aad aragtay boodhadh, bog internet, jaldi ama wax soo jiitay indhaha sababo la xiriira font uu adeegsaday abuurahiisa. Oo waxaad isweydiisay isha ay tahay in laga helo.
Waxaa laga yaabaa in isla wax kaa kugu dhacay wadada, halkaas oo aad ku aragtay wax aad u malaynayso inay ku habboon yihiin mashruucaas aad joojisay, ama inaad ku dhex haysid buuggaaga ilaha maxaa yeelay wax badan ayaa loo isticmaali karaa. Laakiin, Sidee loo aqoonsadaa noocyada xarfaha khadka tooska ah oo lagu ogaadaa nooca font ay tahay? Ha walwelin, maanta waxaan ka hadlaynaa tan.
1 Noocyada qoraalka: adduun dhan oo hadda si fudud loo garto
2 Qalabka lagu aqoonsado noocyada xarfaha internetka
2.1 Font maxay tahay
2.2 Qalabka WhatFont
2.4 BONUS: Daabacaadda Bowfin
3 Waxaan hayaa isha, maxaa hada?
Noocyada qoraalka: adduun dhan oo hadda si fudud loo garto
Dhowr sano ka hor, markii ay farduhu bilaabeen inay koraan, inta badan waxaa sabab u ah naqshadeeyayaal badan oo u sameeyay hal-abuurnimadooda kuwa isticmaala, bilaash ama lacag-bixin, tirada noocyada aan ku dhufannay, saddex laabnay iyo wax badan oo ka sii badan illaa maanta waxaa jira boqollaal kun ilo kala duwan.
Sidaa darteed, markaan ka helno mid naqshadaysan (boodhadh, calan, dabool ...) ma garan karno hubaal, xitaa xirfadleyda ku shaqeysa farta nooc kasta maalin kasta, maxay font tahay. Waa arrin aad u adag.
Markii hore, ma jirin qalab aan ka ahayn qoritaanka websaydhka xayeysiintu ku taal oo si xushmad leh u weydiisanaya inay kula soo xiriiraan naqshadeeyaha si aan u waydiiyo farta uu adeegsaday. Laakiin hada arimuhu way isbadaleen oo waxaa jira aalado dhowr ah oo kaa caawin kara inaad aqoonsato nooca fontku yahay iyo xitaa inuu kuu sheego meesha aad kala soo bixi karto.
Qalabka lagu aqoonsado noocyada xarfaha internetka
Xaqiiqdii hadda waxaad isweydiineysaa maxay yihiin aaladaha aad u adeegsan karto si aad u ogaato isha ay ku waalan tahay oo aadan meelna ka heli karin, sax? Hagaag, kaa yeeli mayno inaad wax intaa ka badan sugto. Kuwani waa kuwa ugu badan ee aan kugula talineyno:
Font maxay tahay
Kani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna jecel kuwa badan maxaa yeelay uma adeego oo keliya in lagu garto qoraallada khadka tooska ah ee internetka; laakiin sidoo kale waxay ku samayn kartaa isla kan aad ku aragto khadka tooska ah, taas oo ah, waddada, joornaalada jireed, boodhadh ... Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad sawir ka qaaddo sida ugu dhow ee suurtogalka ah warqadda iyo tayada aad ku shuban karto .
Marar badan waxay ku weydiin doontaa inaad aqoonsato xarfaha qaarkood, si aysan u jirin wax dhibaato ah ugu dambeyntiina waxay ku siin doontaa liiska noocyada suurto galka ah ee la adeegsan karo. Tallaabada ugu dambeysa ayaa ah inaad dooran karto midka ugu eg (iyo wixii ka sarreeya oo dhan eeg haddii la bixiyay iyo in kale, haddii aad u adeegsan karto adeeg ganacsi iyo in kale ...).
Muuqaal kale oo wanaagsan oo qalabkan ah ayaa ah inay leedahay xog ururin aad u ballaadhan, sidaa darteed way kuu fududaanaysaa inaad hesho ilaha halkan ka jira marka loo eego qalabka kale.
Waa codsi iyo degel labadaba (WhatFont). Waxaan diiradda saarnay arjiga shabakadda maxaa yeelay, haddii aad soo degsato oo aad gashato biraawsarka, uma baahnid inaad gasho websaydhka si loo aqoonsado halka uu ka yimid, laakiin Waxay "kaaga sheegi doontaa" biraawsarkaaga intaad ku dhex socoto bogga aad joogto.
Way fududahay in la isticmaalo oo, sida tii hore, sidoo kale waxay leedahay saldhig wanaagsan.
Qalab kale oo aad u adeegsan karto si aad u ogaato farta ay tahay tan kaa soo jeedinaysaa waa Fontskeyga. Waa degel deg deg ah oo caan ah soo dejinta noocyada farriimaha halkii aad ku aqoonsan lahayd, laakiin dhab ahaantii waa suurtagal in sidaas la sameeyo.
Si tan loo sameeyo, u isticmaal isla nidaamkii ikhtiyaari ugu horeysay ee aan ku siinay, taas oo ah, waa inaad sawir ka qaadataa ishaas oo aad ugu galisaa server-ka ay hayaan. Way falanqeyn doontaa oo waxay ku siin doontaa liistada ilo aad isugu eg, ama xitaa isku mid ah, labadaba lacag iyo lacag la'aan, sidaa darteed waad heli kartaa. Xaalado badan, Waxay noqon doontaa 100% sax, laakiin kuwa kale waxay ka yihiin ilo "gaar" badan, in kastoo aad yeelan karto kuwo la mid ah.
BONUS: Daabacaadda Bowfin
Haddii aad waqti badan ku qaadan karto aqoonsiga nooca qoraalka, oo aad runtii u baahan tahay mid ku siinaya 100%, ama ugu dhow sida ugu macquulsan, nooca ay adeegsadeen, markaa kani waa qalabkaaga.
Way ka xirfad badan tahay, sidaa darteedna way adag tahay in la isticmaalo maxaa yeelay waxay ku weydiin doontaa faahfaahin badan oo isha ah, maahan xaqiiqda kaliya ee ah inaad soo rarto sawirka oo kuu sheegto halka uu ka yimid. Halkan wuxuu kaaga baahan doonaa inaad u sheegto sida xaraf kastaa u yahay, gooladaha, u barwaaqoobayo iyo faahfaahin kale oo keli xirfadleyaasha ku garan karo waraaqaha.
Laakiin sababtaas awgeed ayaanu kugula talineynaa, maxaa yeelay waa mid takhasus gaar ah leh oo ay ku jiraan macluumaad badan iyo qalab dheeri ah oo lagu helo, si kasta ha noqotee, nooca font ee "jacaylka kugu dhacay" adiga.
Waxaan hayaa isha, maxaa hada?
Haddii mid ka mid ah aaladaha aan ka tagnay ay kuu adeegeen, waa wax weyn, laakiin markii aad hesho meesha ay ka timid, Waa inaad maskaxda ku haysaa inaad heli karto dhowr fikradood. Waxaa ka mid ah:
In font-ka aad aqoonsatay uu yahay mid bilaash ah, taasi waa, inaad adeegsan karto oo aan wax dhib ah ku qabin isticmaalkiisu inuu yahay mid ganacsi ama mid shaqsiyeed. Tani caadi ahaan maahan kiiska, laakiin way dhici kartaa.
In fontku yahay mid bilaash ah, laakiin aan loo adeegsan ganacsi. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad u adeegsan karto heer shaqsiyeed, laakiin aan ganacsi ahaan u adeegsan karin, illaa aad la xiriirto abuuraheeda oo aad weydiisato rukhsad ama lacag aad ugu isticmaasho sidan.
Nooc loogu talagalay bixinta. Waa ikhtiyaarka kale, in qoraalka noocaas ah ee aad aadka u jeclaatay uu yahay xaraf ay tahay inaad ku bixiso si aad ugu isticmaasho. Laakiin ha ka welwelin, taas macnaheedu maahan inay had iyo jeer kharash badani ku baxo; laakiin waxaa jira qiimo badan. Marka, waxaad ka heli kartaa wax kasta oo ka socda barataska ilaa kuwa kale, markaa haa, waxay kaa dhigi doonaan inaad doorato ilo isku mid ah.
In kasta oo ay jiraan wax kasta, naqshadeeye ama qof kasta oo ku shaqeeya waraaqaha xarfaha ayaa aad muhiim u ah in noocyo badan oo ka mid ah gacanta lagu hayo, qalabyadani waxay kaa caawin karaan inaad aqoonsato oo aad heshid noocyada farta ah ee aad faa'iidada u leedahay.
Ma taqaanaa qalab aqoonsi oo dheeri ah si aad u ogaato nooca ay font tahay? Wax ma nooga sheegi kartaa midkoodna?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Waa maxay isha ay leedahay 3 Qalabka lagu aqoonsado noocyada xarfaha khadka tooska ah
Aad u fiican, waad ku mahadsan tahay waan u baahanahay.
Jawaab Oscar Rodriguez
Sida loo sameeyo thumbnails YouTube-ka Canva